Lacag-sameynta Warqadda Emailka: Laba Ikhtiyaar oo Fudud oo loogu talagalay Bloggers iyo Madbacadaha Micro
Lacag-sameynta Warqadda Emailka: Laba Ikhtiyaar oo Fudud oo loogu talagalay Bloggers iyo Daabacayaasha Yaryar
Tuesday, April 10, 2012 Isniin, Disembar 17, 2018 Scott Hardigree
Saameyntu maahan meesha kaliya ee u gaar ah daabacayaasha waaweyn. Kubbadaha indhaha iyo suuqgeynta suuqgeynta ayaa loo weeciyay dhanka ciidan daabiciyayaal yaryar ah; ha ahaadaan kuwa ilaaliya waxyaabaha wax lagu qoro, kuwa wax qora, kuwa wax qora, ama kuwa wax duuba.
Marka la eego baahida kordhay, daabacaadan yar waxay si sax ah u raadinayaan qaabab ay si feker ahaan uga faa'iideystaan ​​dhagaystayaashooda, iyo dadaalkooda.
Ku macaashka Warqadaha Emailka
Iyada oo ay weheliso kuwa kale xeeladaha lacag-ururinta ee ay hadda adeegsadaan, sida xayeysiiska soo-bandhigga websaydhka iyo kafaala-qaadka warbaahinta bulshada, daabacayaasha takhasuska maanta leh waxay leeyihiin laba ikhtiyaar oo xusid mudan oo loogu talagalay monetay-ka wargeysyadooda email sidoo kale.
Lacag-sameynta hantida emayl ee soo-saaraha ma aha wax cusub laakiin illaa dhawaa waxaa jiray caqabado badan, sida cabbirka liistada ugu yar, taasoo ka reebtay ka-qaybgalayaasha daabacadaha yaryar.
Sida wakaaladda suuqgeynta iimaylka adeegga buuxa xiisaha daabacaadda, waxaan adeegsanay xeelado dhowr ah si aan uga caawino dadka wax qora ee wax qora in ay kobciyaan dakhligooda emailka - iyadoon toos loo iibin ama aan la kordhin culeyskooda shaqo. Waa kuwan laba ka mid ah kuwa ugu cadcad:
Xayeysiiska Warqadaha Emailka
Waxaan aragnay in xayeysiiska bandhiga, lagu duubay emaylka ama hareerahooda, ay yihiin waxqabad xoog leh marka loo eego qiimaha; xayeysiistayaasha iyo daabacayaasha si isku mid ah.
Martech Zone wuxuu adeegsadaa mid ka mid ah shabakadaha ugu weyn ee xayeysiiska emaylka, LiveIntent, inay lacag ka dhigato joornaalkeeda.
Warsidaha Hacker, oo uu daabacay Kale Davis, la taabtay LaunchBit si firfircooni ah hal xayeysiis loogu durayo warside kasta. Kale wuxuu u adeegsadaa Mailchimp bixiyaha adeegga iimaylka kaas oo lagu dhex daray LaunchBit; samaynta xulashada xayaysiiska si fudud oo toos ah duritaan.
Taa beddelkeeda, Dan Lewis la Hada waan ogahay wuxuu ku soo bandhigayaa xayeysiis badan joornaalkiisa. Dan ayaa adeegsada LiveIntent iyo sidoo kale LaunchBit. Labaduba waxay sidoo kale si adag ula falgalaan adeeg bixiyaha emaylkiisa.
Emails-ka La-kafaala-qaaday (oo ah Kirada Liiska Email)
Liiska cinwaanka emaylka ayaa boos iska beddelay sannadihii la soo dhaafay, si ka wanaagsan. Ha igu qaldan, wali waxaa jira kaydad shirkado liisas ah oo kireysanaya, ama xitaa iibinaya, liisaska e-mayllada aan qiimaha lahayn laakiin sidoo kale waa run in liiska kirada e-maylka dhabta ahi uu sii ahaanayo mid xoog badan. Xitaa sidaas oo ay tahay, qaar badan oo daabacayaasha yaryar ka mid ahi way diidan yihiin xitaa inay tixgeliyaan kirada liiska emaylka oo ah istiraatiijiyad lacag-dejin.
Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah daabacayaasha niche waxay leeyihiin xiriir dhow, shaqsiyeed badan oo lala yeesho macaamiishooda oo aysan rabin inay u ekaadaan kuwa macaash doon ah. Malaha waa faham la'aan maxaa ku qoran kirada run ahaantii waxaa ka mid ah.
Ama waxaa laga yaabaa inay tahay uun magac xumida magaca oo damineysa daabacayaasha cusub. Halkii aan ka noqon lahayn "liiska kirada emailka" waxaan marwalba ugu magacdarnay E-maylad ay Damaanadqaadeen ama E-maillo Dheehan ah oo, iyadoo la tixgelinayo in dalabka xayeysiistaha uu sida caadiga ah ku duuban yahay shaashadda emayllada daabacayaasha, ayaa ka habboon.
Waa kan emayl kafaala qaaday DailyWorth; daabacaad bixinaysa talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan maaliyad shaqsiyadeed maalin kasta haweenka. Tusaalahan xayeysiiyaha waa ShoeMint.
Hoos waxaa ku yaal tusaale Wilson Web, oo daabaca Suuqgeynta Webka Maanta warside ka kooban ecommerce, suuqgeynta iimaylka, iyo talooyinka suuqgeynta websaydhka. Xayeysiiyaha waa Lyris, oo ah emayl adeeg bixiye suuqgeyn ah.
Khibradeyda, shirkadaha maareynta liiska emailka maanta waxay qabtaan shaqo fiican oo ah isku xirka xayeysiistayaasha iyo dhagaystayaasha niche. Teknolojiyada iyo suuqa ayaa aad u hormariyay sidoo kale u ogolaanaya xayeysiiyaha, ama liiskooda dulaaliinta, inuu si fudud u kireeyo liisaska, u fuliyo ololeyaasha, iyo waxqabadka tijaabada.
Maxay Yihiin Waajibaadka Madbacadda?
Shabakadaha soo bandhigida emaylka iyo liistada liiska shirkadaha kireysta waxay ka dhigaan lacag-soo-saaridda warsideyaasha mid fudud oo loogu talagalay daabacayaasha. Laga soo bilaabo sahaminta iyo iibinta ilaa warbixinta iyo lacag bixinta, dhammaantood wax badan ayey wada qabtaan.
Mas'uuliyadaha socda ee daabacaha ayaa ku xaddidan xulashada / oggolaanshaha xayeysiiyaha xayeysiiyaha / dalabyada iyo sii wadista la macaamilka macaamiishooda.
Immisa Ayuu Faafin Karaa Soo Saaraha Daabacaha?
Xayeysiiska Muuqaalka Email -Xayeysiimaha soo bandhigida iimaylka ayaa sida caadiga ah lagu iibsadaa saldhig wax qabad, sida qarash-riix ama qiime-aragti, sidaa darteed cabirka inta badan loo isticmaalo soo-saarista iyo xisaabinta dakhliga waa kharashka ku baxa kunkiiba ama eCPM. eCPM waxaa loo xisaabiyaa iyadoo loo qeybinayo wadarta dakhliga guud ahaan tirada dareenka kumanaan. Markii wax laga weydiiyay celcelis ahaan eCPM-yada, Elizabeth Yin, oo ah aasaasaha LaunchBit, waxay tiri "inay jiraan wax badan oo kala duwan, laga bilaabo laba doollar illaa ku dhowaad $ 100 eCPM (wuu furan yahay)." Way sii socotaa iyada oo leh “wargeysyada ugu fiican ayaa jecel Thrillist, kuwaas oo iibiya alaabadooda, waxay kasbadaan $ 275 eCPM iyadoo kuxiran qaabka xayeysiinta. ”
E-mayllada la hibeeyay -E-mayllada loo qoondeeyey ayaa badiyaa lagu iibsadaa a Kharashka-kunkiiba, ama CPM, oo macnaheedu yahay in daabacayaashu ay ka helaan khidmad fidin ah kun kasta oo emayl oo la soo diro, iyo waliba lacag dheeraad ah oo loogu talagalay bartilmaameed kasta oo uu codsado xayeysiiyaha Lacag bixinta kuma xirna waxqabadka, si kastaba ha noqotee liisaska waxqabadka liita ayaa si dhakhso leh u ridi doona shirkad kasta oo kiro ah oo qiimo u leh milixdooda. E-mayllada gaarka loo leeyahay ayaa celcelis ahaan gaaraya $ 80- $ 250 CPM, sida laga soo xigtay Worldata Liiska Tusmada Qiimaha, oo leh liisas ganacsi-ganacsi iyo liis gareyn caalami ah oo qaata illaa $ 400 CPM. Iyada oo ku saleysan tirooyinka hadda jira bixinta lacagta loogu talo galay emaylka loo qoondeeyey ama la kafaala qaaday ayaa ka weyn xayeysiisyada muujinta iimaylka, laakiin daabacayaasha fekerka leh ayaa xulanaya inta jeer ee ay u diraan emaylladdan gaarka ah; sidaa darteed waxaa jira fursado yar oo looga faa'iideysan karo liiska kirada cinwaanka emaylka.
Kala Qaybinta Dakhliga -Labada emaylba waxay soo bandhigaan shabakadaha xayeysiiska iyo liistada liiska shirkadaha kireysiga waxay ku shaqeeyaan qaab wax qabad; taasoo la micno ah in wax lacag ah laga qaadi doonin daabacaha, taa badalkeedana ay si fudud ula wadaagaan dakhliga ka soo gala xayeysiiyaha. Tusaale ahaan, liistada liiska emaylka, daabacaha ayaa hayn doona 50% -80% dhammaan liisaska liistada. Kala qeybsanaanta dakhliga ee iimaylka xayeysiinta, si kastaba ha noqotee, xoogaa way ka adag tahay hoos u dhigid.
Haddii dhagaystayaashaadu baahi weyn u qabaan, waad heli kartaa oo waa inaad lacag ku siisaa helitaankeeda. Had iyo jeer waad iibin kartaa naftaada xisaabta emailkaaga, laakiin khibraddu waxay i tustay inaad u badan tahay inaad heli doonto dakhli ka yar inta aad si adag ugu shaqeyneyso. Gaar ahaan liiska emaylka boqortooyada kirada.
Markasta oo daabacayaasha yar yar ay si fiican wax u suuq geynayaan, dalab badan ayaa loo heli doonaa waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Taas ayaa iyaduna horseedaysa koritaanka liistada, oo ay si toos ah iyo si aan toos ahaynba ugala xisaabtami karaan, iyadoon loo eegin hadday doortaan inay adeegsadaan xayeysiisyada la kafaala qaaday, emayllada la kafaala qaaday, ama qaab kasta oo kale.
Waxaan leeyahay, Daabacayaasha mashquulka badan ayaa laga yaabaa inay ka fiicnaadeen inay uga tagaan lacag-siinta aan tooska ahayn xirfad-yaqaannada oo ay tijaabiyaan dhammaan tabaha ku habboon dhagaystayaasha. Maxaad leedahay
Tags: Email Marketinglaunbitnololeedpublisher
Adeegsiga Baraha Bulshada si aad u Kobciso Dhacdadaada Xigta
Apr 18, 2012 at 7: 23 AM
Waxaan soo saarayaa warsidahaygii ugu horeeyay tanina waa macluumaad aad ufiican oo aan isticmaalo. Mahadsanid.